Ubungozi bomlilo cishe kulo lonke elaseSpain buphakathi kokuphakama kakhulu nokudlulele | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amazinga okushisa aphakeme kakhulu ngalolu Lwesihlanu, Agasti 18 bebelokhu bekhalaza ezweni lonke, bakhulisile Ingozi yomlilo "ephezulu kakhulu" cishe kuyo yonke indawo kazwelonke, kufaka phakathi iziqhingi. Ingxenye engasogwini kuphela yeGalicia engaphansi kobungozi, futhi cishe lonke ugu lwaseCantabrian kufaka nengxenye enkulu ye-Asturias. Ezinye izindawo zaseMurcia nase-Alicante eziseduze nolwandle ubungozi buba phakathi.
Ukushisa okukhulu osekuphinde kwahlasela izwe lonke kusukela izolo kuxwayise izwe lonke. Yize kulindeleke ukuthi amazinga okushisa aqale ukwehla kusukela kusasa, izexwayiso zizoqhubeka kakhulu. Lezi ziqhingi kusasa ngoMgqibelo zizoqhubeka nokuba sengozini enkulu, ngaphandle kwezinye izindawo ezilinganiselwe eCanary Islands. Ezinye izindawo ezizoqhubeka nokudalulwa kuzoba yi-Andalusia, izifundazwe zaseValladolid, iSegovia, iZaragoza, ingxenye yePyrenees yaseHuesca nezindawo zezifundazwe i-Avila, iCuenca neToledo. Ngakolunye uhlangothi, iGalicia, ingozi izokwenyuka iye phezulu kakhulu.
Izindawo ezisengcupheni kakhulu
Imephu yobungozi bomlilo inikezwe yi-AEMET, Agasti 18
Izifundazwe zonke zisengozini enkulu ngomlilo engxenyeni enkulu yezwe. ISegovia, iSoria, iGuadalajara, nezingxenye ezinkulu zeBarcelona, ​​iZaragoza, iBurgos, iValladolid ne-ilavila ziphakathi kwezifundazwe eziseqenjini laseNyakatho ezinobungozi obukhulu. Kusuka eqenjini laseSud, sithola okuningi kwe-Extremadura nesifundazwe saseCiudad Real kusengcupheni enkulu. Futhi izindawo ezinengxenye ye-Andalusia, lapho kulindeleke nokuthi kusasa ingxenye enkulu yomphakathi izoqhubeka nobungozi obedlulele futhi obuphezulu kakhulu.
IPortugal imemezele izolo isimo senhlekelele yomphakathi ngenxa yengozi yemililo. Izwe, ngemuva kokuhlaselwa yimililo yakamuva elimazayo, selize lahlanganisa amabutho ahlomile, phakathi kweminye imibutho yezokuphepha njengamaphoyisa, nabezicishamlilo, ukuba balungele ukuqubuka okungenzeka kuvele ngempelasonto.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Ubungozi bomlilo cishe lonke elaseSpain buphakathi kakhulu kakhulu futhi bukhulu kakhulu